> Resource > Ladnaansho > Sida loo soo ceshano fariimaha qoraalka tirtiro (Android & macruufka)
Haddii aad si qalad ah la tirtiro fariimaha qoraalka ah ee aad taleefan oo aad rabto inaad dib u hesho ka dib, waxaad tahay meesha hadda. Maqaalkani waxa uu doonayaa inuu aad u soo bandhigo habab wax ku ool ah inay ka soo kabsadaan fariimaha qoraalka ah tirtiray ka taleefannada gacanta oo kala duwan, iyadoo aan loo eegayn waxa uu ku salaysan Android ama macruufka. Kaliya dooro habka ugu haboon ee aad hoos ku qoran iyo waxa ay raacaan si ay leeyihiin isku day ah.
Qeybta 1: Ladnaansho fariimaha qoraalka ah tirtiray ka macruufka qalabka
Qeybta 2: Ladnaansho fariimaha tirtiray ka Lugood gurmad
Qeybta 3: ceshano fariimaha qoraalka ah tirtiray taleefanada Android
Farriimaha qoraalka Ladnaansho tirtiray ka qalabka macruufka: Qeybta 1
Si aad u soo kabsado fariimaha ka qalabka macruufka, waxaad u baahan tahay in ay la macruufka qalab kabashada xogta hore. Haddii aadan haysan mid, halkan waxaad heli kartaa aan talo: Wondershare Dr.Fone ee macruufka (iPhone Data Recovery) ama Wondershare Dr.Fone ee macruufka (Mac iPhone Data Recovery) , taas oo si toos ah iskaan karaa iPhone, iPad iyo iPod xiriiri si aad u hesho xogta laga badiyay iyaga ku , oo ay ku jiraan iMessages iyo lifaaqyada fariin. Ka hor inta soo kabashada, waxay kuu ogolaanaysaa inaad marka hore ku eegaan content oo dhan. Hadda download version maxkamadda hoose si aad u leeyihiin isku day ah.
Next, aynu qaadan version Windows sida isku day ah in tallaabooyin wada. Users Mac sidoo kale raaci kartaa tallaabooyinka hoose. Labada versions shaqeeyaan si la mid ah.
Tallaabada 1. Isku qalab macruufka iyo waxa laga baarayo
Ka dib markii socda barnaamijka, aad u hesho qalab ku xiran computer la cable USB ah. Markii barnaamijka waxay aqoonsan tahay qalab aad, waxa hagi doona inaad iskaan qalab aad by socda sharaxaad ku saabsan sida ay suuqa kala ah sida soo socota.
Wixii iPhone 4 / 3GS, iPad iyo iPod 1 xiriiri 4 isticmaala, waxaad arki doonaa suuqa kala hoose. Markaas raac tilmaanta si aad u hesho qalab la marsiiyey: riix Power iyo badhamada Home waqti isku mid ah ee saxda ah 10 seconds ka dib markii aad riix Start button. Markaas sii daayo button Power iyo sii riixaya badhanka Home muddo 10 ilbiriqsi oo kale, ilaa aad ka hesho hab iskaanka ah. Ka dib markii in, barnaamijka si toos ah iskaan doonaa qalab aad.
Wixii tusaalayaal kale oo ka mid ah iPhone, iPad iyo iPod taabto, aad arki doonaa suuqa kala barnaamijka ee hoos ku qoran. Waxa aad u baahan tahay inaad samayso si toos ah waa riix badhanka Start Scan si ay u bilaabaan baar qalab aad farriimaha laga badiyay waxaa ku.
Tallaabada 2. Kulanka Xiisaha Leh ceshan fariimaha la tirtiro
Habka iskaanka ayaa aad ku kici doona in yar. Marka la joojiyo, aad sabab u scan heli doonaa. Waxaa, dhammaan xogta recoverable helay qalab aad u habeysan yihiin in qaybaha. Wixii farriimo, waxaad dooran kartaa waxyaabaha Messages iyo Lifaaq Messages . Sax Fariimaha aad rabto in aad inta aad previewing. Markaas riix Ladnaansho badhanka si ay u helaan iyaga oo dhan badbaadiyey on your computer la click hal.
Ka sokow fariimaha tirtiray, barnaamijkan sidoo kale soo bandhigay dhamaan fariimaha jira on qalab aad. Haddii aad rabto in aad dib oo kaliya waxyaabaha tirtiray, oo aad u kala sooci karaa iyada oo jeestay badhanka ee soo bandhigaan waxyaabaha tirtiray oo keliya . Markaasaad arki doontaa oo kaliya waxa aad rabto iyo iyaga soo kaban karto, eegista.
Qeybta 2: Ladnaansho fariimaha tirtiray kaga imaanayo Lugood
Haddii aad karto ma heli tirtiray fariimaha qoraalka ah oo ay si toos ah aad ka baareyso iDevice, waxaad bedelan kartaa si aad u hesho by saarida gurmad Lugood, laakiin waxaa jira a pre-xaalad ah in aad synced qalab la Lugood hor. Lugood ma ogola qof si aad u eegto waxa ku jira gurmad. Sidaas waxa ugu horeeya ee aan u baahanahay in la sameeyo waa hab uu ku ku eegaan oo hubi waxa ku jira gurmad. Waxaad kaloo isticmaali kartaa Wondershare Dr.Fone ee macruufka (iPhone Data Recovery) ama Wondershare Dr.Fone ee macruufka (Mac iPhone Data Recovery) . Ma aha oo kaliya laga baarayo qalabka, waxa kale oo kuu ogolaanaysaa inaad soo saaro gurmad Lugood iyo eegista heli kasta oo aad jeceshahay waxaa ka. Next, ogolaanaysaa wada leeyihiin isku day ah.
Ka dib markii socda barnaamijka, guuraan habka soo kabashada kale ee sare ee ay suuqa kala hoose: kabsado Lugood ee kaabta File . Marka aad halkaas tago, barnaamijka si toos ah u heli doonaan, oo waxay soo bandhigaan dhammaan Lugood files gurmad on your computer, oo aad arki doonaa suuqa kala hoose. Dooro mid aad rabto in aad soo saaro oo guji Start Scan u dhaqaaqo.
Marka scan la dhammeeyo, waxaad ka akhrisan kartaa waxa ku jira oo dhan oo ah gurmad Lugood in natiijada scan. Dooro qaybta farriimaha, halkaas oo ay dhammaan fariimaha iyo iMesssages waxaa la geeyaa. Waxaad iyaga ka akhrisan kartaa si faahfaahsan. Sax waxyaabaha aad rabto iyo guji Ladnaansho iyaga badbaadiya on your computer.
Download version maxkamadda hoose ee lacag la'aanta ah si ay leeyihiin isku day ah hadda!
Ma ah macruufka qalab user? Waxa kale oo jira tuse faahfaahsan u isticmaala Android oo ku saabsan sida inuu ka soo kabsado fariimaha qoraalka ah ee la tirtiro qalabka Android. Halkii Wondershare Dr.Fone ee macruufka (iPhone Data Recovery) , waxaad u baahan tahay in ay isticmaalaan Wondershare Dr.Fone for Android (Android Data Recovery) dib u soo ceshano fariimaha tirtiray taleefanada Android. Sida mid ka mid ah ay Gordhaw Kadhoofaan, Wondershare Dr.Fone for Android kuu ogolaanaya in aad si toos ah iskaan telefoonada Android kala duwan inay ka soo kabsadaan tirtiray fariimaha, xiriirada, sawiro, videos, audio iyo waraaqaha. Sidoo kale, waxa uu ku siinayaa version tijaabo ah, kaas oo awood kuu leeg, oo ku eegaan xogta recoverable hore. Aan download it hoose si wada leeyihiin isku day ah.
Tallaabada 1. sahlo debugging USB qalabka Android aad
Ka hor inta aadan wax kale samayn, waxaad u baahan tahay in ay awood u debugging USB qalabka Android aad hore. Haddii aad hore u karti, waxaad ku boodi kartaa tallaabada xigta. Haddii aan, fadlan hubi by socda sharaxaad ku saabsan suuqa kala barnaamijka.
Tallaabada 2. Ku bilow baar qalabka Android aad
Ka dib markii ay u suurta debugging USB, aad doonaa in halkaas lagu hanuuniyey: iskaan qalab aad. Ka hor inta iskaanka, waxaad u baahan tahay in la hubiyo in batteriga qalabka aad ka badan tahay 20%, si aad u buuxin kartaa habka iskaanka si guul leh. Markaas riix Start si ay u bilaabaan. Waqtiga sawiridda, ha waqtiga oo dhan sii qalabka ku xiran.
Tallaabada 3. Kulanka Xiisaha Leh ceshan
Dhab ahaantii, waxa aad bilaabi kartaa previewing xogta laga helay natiijada scan waqtiga sawirka. Marka aad hesho waxa aad doonayso, waxaad joojin kartaa baaritaan waqti kasta. Markaas dooran waxyaabaha aad rabto iyo guji Ladnaansho button iyaga badbaadiya on your computer.